36th Precinct (2004) | MM Movie Store
ပဲရဈမွို့ပျေါမှာ ဒုစရိုကျအမှုတှအေမြားအပွားကြူးလှနျနလေကျြရှိပွီး ရဲတပျဖှဲ့ကို အမွဲတမျးလိုလို ဒုက်ခပေးတာကွာပွီ… ဒီမွို့မှာပဲ လီယိုဗရငျ့ချဈ နဲ့ ဒနျးနဈကလီယနျ ဆိုတဲ့ရဲအရာရှိနှဈယောကျဟာ ရာထူးတိုးအောငျအပွိုငျအဆိုငျ ယှဉျပွိုငျနတေဲ့ရဲနှဈယောကျဖွဈတယျ
သူတို့မွို့ကနာမညျကွီးဆုံးလူဆိုးဂိုဏျးအဖှဲ့ရဲ့သတငျးကိုရဖို့အတှကျ နှဈဦးနှဈဖကျလုံးဟာ လူဆိုးတဈခြို့နဲ့ပူးပေါငျးပွီး သတငျးနှိုကျကွတယျ..၂ယောကျလုံးဟာလညျး အရညျအခငျြးရှိတဲ့သူတှေ… လူဆိုးဂိုဏျးကလညျး အဖှဲ့တောငျ့တဲ့အပွငျ တကယျ့လကျရဲဇကျရဲတှေ…သူတို့ ၂ယောကျစုံစမျးတာအောငျမွငျမလား….
ကွားထဲမှာ ဘယျလိုပွသနာပေါငျးစုံကွုံတှရေ့မလဲဆိုတာကိုတော့ Action , Crimeတှကေိုမှ ကွိုကျတဲ့သူတှအေဖို့ ဒီကားက နငျးကနျလနျးတယျလို့သတငျးကောငျးပါးပါရစေ…
ပဲရစ်မြို့ပေါ်မှာ ဒုစရိုက်အမှုတွေအများအပြားကျူးလွန်နေလျက်ရှိပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကို အမြဲတမ်းလိုလို ဒုက္ခပေးတာကြာပြီ… ဒီမြို့မှာပဲ လီယိုဗရင့်ခ်စ် နဲ့ ဒန်းနစ်ကလီယန် ဆိုတဲ့ရဲအရာရှိနှစ်ယောက်ဟာ ရာထူးတိုးအောင်အပြိုင်အဆိုင် ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ရဲနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်
သူတို့မြို့ကနာမည်ကြီးဆုံးလူဆိုးဂိုဏ်းအဖွဲ့ရဲ့သတင်းကိုရဖို့အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးဟာ လူဆိုးတစ်ချို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီး သတင်းနှိုက်ကြတယ်..၂ယောက်လုံးဟာလည်း အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေ… လူဆိုးဂိုဏ်းကလည်း အဖွဲ့တောင့်တဲ့အပြင် တကယ့်လက်ရဲဇက်ရဲတွေ…သူတို့ ၂ယောက်စုံစမ်းတာအောင်မြင်မလား….
ကြားထဲမှာ ဘယ်လိုပြသနာပေါင်းစုံကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကိုတော့ Action , Crimeတွေကိုမှ ကြိုက်တဲ့သူတွေအဖို့ ဒီကားက နင်းကန်လန်းတယ်လို့သတင်းကောင်းပါးပါရစေ…